Hardanka Buuhoodle, Hagardaamada Isimada iyo hungada ka dabaysa!!1 | Daldoon Ugu Kaalay Wararkii Ugu Danbeeyey
Laga bilaabo bishii Janaayo ee 2012 intii kooxda Khaatumo saaxada kusoo biirtay waxa degaannada SSC la kowasadeen, colaado sokeeye oo reeraha dhexdooda ah, tafaraaruq iyo tuhun hor leh iyo is aamminaad daro reeraha dhexdooda ah, degaannadii SSC marka laga reebo degmada Buuhoodle dhammaan oo ku wareegay maamulka Somaliland, dhaqan burbur, aflagaaddo aan loo meel dayayn (oo laba sharciyeeyey).
Arrimaahaasi waxay sababeen in intii markii hore taageertay kooxdan Khaatumo oo run ahaantii la odhan karo waxay ahaayeen dadka badidiisa ay aakhirkii dareemeen waxay filanayeen wax ka geddisan. Waxyaalaha la yaabka leh waxa ka mid ahaa in qofkii ka mid ah masuuliyiinta Khaatumo ee hadal kasoo celiya jihada loo socdo hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu goleha wasiirrada ku jiro amaba ka mid yahay taliyeyeyaasha ciidammada in xilka laga xayuubiyo. Waxa kaloo iyana la yaab ahayd in qofkii ka mid ahaa taageerayaasha Khaatumo ee saluuga sida wax loo wado in loo qaybiyey dad aflagaaddeeya oo shabakadaha saxaafadda kusoo daabaca, amaba qolal telefoonno oo loo furay taageerayaasha daacadda ah laga aflagaadeeyo amaba shaaracyada laga caayo.
Isimmadu waxay garabsadeen firqadii ugu danbeysey ee kasoo fallaagoowday Dr Galaydh oo la baxday “Guurtida Khaatumo”. Kooxdan cid masuuliyad u dhiibatay ma jirto haba yaraatee, waa koox iskeed isu cugatay oo wadaaga dano gaara oo mideeya. Eeg qoraalkan
Yaa dirsaday kooxda G10
Dagaal siyaasadeedka Buuhoodle ka taagan ee u dhexeeya labadan garab ee Khaatumo waxa muuqata in maalmahan ay gacanta sare lahaayeen garabkii is biirsaday ee Cabdalle Cagalule, G11 iyo Isimmadii Xamar. Waxa muuqata in Dr Galaydh ku jiro go’doon dadkiina badi kasoo taagan yihiin. Waxaanse odorosayaa in Dr Galaydh aanu weligii isdhiibayn ciddiyahana ku dagaallamayo.
Dr Galaydh khibrad, aqoon, iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo qoto dheer ayuu leeyahay markasta oo uu go’doon galona meel aadan ka filanayn ayuu kasoo baxaa. Waxa muuqata inuu xadhko badan isku xidhayo kooxdan Cagalulena uu daalinayo sugayona inta sahaydu ka dhammaanayso. Waxaynu ayaamahan maqlayney isagoo qaylodhaan u dirsanayo tolkiisa Siyaasadeed ee Somaliland, aakhirkiina Somaliland way kasoo jawaabeen qaylodhaantaa. Waxa xaqiiqo ah inuu sahay kasoo qaatay safarkiisii Widhwidh marka ay habboonaatona uu sahaydaa Buuhoodle la imaanayo halkaana dib uga bilaabayo dagaal rogaal celis ah. Reer Buuhoodle waxay xarfaan ku yihiin sida looga dhex faa’iidaysto waxyaalo is khilaafsan waxaana hubaal ah inaanay dhabarka u jeedinayn safarka sahayda ah ee Dr Galaydh keeni doono.